किन संसारले योग गर्छ?
व्यायाम, हाइपरटेन्सनसँग सम्झौता गर्ने एउटा स्वस्थ तरिका
कुनै दोष बिना चकलेट खानुहोस्
वेट लस प्लेट्यु
जब फुलेको कपालले अर्थ राख्छ !
प्रत्येक रात मिठो निद्रा पाउनुहोस्
सनबर्न(घामले डढाउने): समिक्षा र उपचार
Q कृपया तौल बढाउनको लागि उचित शाकाहारी आहार तालिका मार्गनिर्देशन दिनुहोस्
उचित शाकाहारी आहार तालिका बनाउनका लागि थप विवरणहरू जस्तै तपाईंको उमेर, लिङ्ग, उचाइ, हालको तौल र शारीरिक क्रियाकलापको स्तरको आवश्यकता पर्दछ । तौल बढाउनको लागि तल निम्न सामान्य शाकाहारी आहार तालिका तल प्रस्तुत गरिएको छ: खाना बिहानको १-८ मा दिनुहोस्: पूरै गहूंको रोटी र पनीरको स्याण्डविच र १ कप दूध । खाना बिहानको २-११ बजे: १ ओटा केरा । खाना दिउँसोको ३-२ बजे: रोटी, तरकारी र दही । खाना दिउसोको ४- ५ बजे: एक मुठ्ठी भुटेको बदाम र १ कप दूध । खाना साँझको ५- ८ बजे: रोटी, तरकारी र दाल वा भात, तरकारी र दाल ।
Q तपाईंले आफ्नो कपालमा रङ लगाउँदा कपालको र. तपाईंको टाउकोको रौं समेतको छालामा चुहियाउनु हुन्छ र कुनै खराब स्वास्थ्य समस्या हुन्छ
छाला पोल्ने, एलर्जी प्रतिक्रिया, कपालको क्षति, वरिपरिका छाला खुइलिनु आदि कपालमा रङ लगाउनेसँग सम्बन्धित केही साईड ईफेक्टहरु हुन् ।
Q धेरै प्राकृतिक रङ्को कारणले मेरो गोप्य भाग कालो भएको छ । म यसलाई सामान्य रङको देखिने बनाउन चाहन्छु
गोप्य भागमा केहि मात्रा प्राकृतिक रङभन्दा बढि गाढा हुनु सामान्य हो । यद्यपि यदि तपाईंलाई यो अत्यधिक हो वा यदि यो अन्य लक्षणहरूसँग सम्बन्धित छ जस्तो लाग्यो भने चिकित्सा मद्दतको आवश्यकता पर्दछ । यदि तपाईंको धेरै गाढापना चिलाउने, पोल्ने आदि जस्ता लक्षणहरूसँग सम्बधित छ भने यो दादको संक्रमण भएको हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा तपाईंलाई दाद बिरुद्धको वा एन्टिफुँगल औषधि चाहिन्छ । यदि गोप्य भागको साथसाथै तपाईं घाँटीको पछाडि काखीमा पनि गाढा रङ छ भने, त्यसपछि तपाईंले मधुमेहको लागि पनि आफैंलाई जाँच गर्न आवश्यक पर्दछ । टोपिकल औषधि र लेजर उपचारले प्राकृतिक रङको गाढापना कम गर्न मद्दत गर्दछ । एकजना सौन्दर्यविदसँग परामर्श लिनुहोस् ।
Q के भिटामिन सी उत्तेजित खालको हुन्छ ?
कुनै पनि भिटामिन सी उत्तेजना दिने हुदैँन । यो पानीमा घुलनशील भिटामिन र अक्सिजन आपुर्ति कम गर्ने चिज हो । भिटामिन सी को काम प्रतिरक्षा क्षमता बढाउनको लागि, आईरनको सोस्ने शक्ति बढाउनको लागि, कोलेजन गठनमा मद्दत गर्न र स्वतन्त्र कडा हमलासँग लड्नको लागि हो ।
Q शरीर धेरै पातलो छ... केही आहाराको उपयोगी जानकारीहरु
तौल बढाउने कुरा तपाईंको आहार र ब्यायामको ढाँचामा निर्भर गर्दछ । तपाईंको आहारमा अण्डा, चिकेन, माछा, दूध र दूधजन्य उत्पादनहरु, बदाम, दाल आदि क्यालोरी र प्रोटीन धेरै पाइने खानाहरू समावेश गर्नुहोस् । हरेक बिहान मह र २ ओटा केरासहितको एक गिलास दूध खानुहोस् । हरेक दिन एक मुठ्ठी भरि मिसाइएको बदाम खानुहोस् । तौल बढाउने कुरा स्वस्थ हुनु पर्छ र त्यसैले तपाईंले जङ्क खानेकुराको सेवनलाई सीमित गर्नु पर्छ । ३ पटक ठूलो खानेकुराहरु खानुको सट्टामा ५- ७ ओटा साना खानेकुराहरू खानुहोस् । एउटा व्यायामशालामा जानुहोस् र कसैको निरीक्षणमा तौलको प्रशिक्षणको अभ्यास गर्नुहोस् ।